Itoophiyaan qabeenya konkolaataan addunyaa irratti sadarkaa 186ffaa irratti argamti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Itoophiyaan qabeenya konkolaataan addunyaa irratti sadarkaa 186ffaa irratti argamti
Harun Hassen | Mootummaan Itoophiyaa konkolaataa irratti qaraxa hanga %300 gaafata
Mootummaan Itoophiyaa konkolaataa biya alaatii seenan irratti qaraxa hanga %300 gayu kan gatu taúun isaa beekame. Qaraxni hangas guddatu kuni gatiin konkolaataa biyyattii keessatti waan namoonni heddu hiixxatanii hin dhaqqabne taasiseera. Konkolaataan ummata hedduuf ammas meeshaa mijjuu akka taétti itti fufee jira.
Qaraxni mootummaan konkolaataa irratti gate kuni hedduu guddaa fi biyyattii tarree biyoota akka Kuubaa fi Kooriyaa Kaabaa irra kaayee jira.
Itoophiyaan tarree biyyoota gatiin konkolaataa hedduu qalii itti taé keessatti argamti. Fakkeenyaaf konkolaataan biyya ollaatti (Keeniyaa) Doolaara Ameerikaa 8000 gurguramu Itoophiyaa keessatti Doolaara Ameerikaa 16,000 gurgurama, akka gabaasa BBC’itti. Haalli kuni biyyattii keessatti konkolaataan laakkofsaan hedduu xiqaa taé akka jiraatu taasiseera. Namoota 1000 konkolaataa 2 qofa kan Itoophiyaa keessa jiru. Sadarkaa addunyaatti qabeenya konkolaataan Itoophiyaan, gara dhumaa, sadaraa 186ffaa irratti kan argamtu. Kana jechuun Afrikaa keessatti biyya 3 qofa kan qabeenya konkolaataadhaan Itoophiyaa gaditti argaman.
Wanti guddinni biyya tokkoo keessa jirachuu ittiin mirkanaayu keessaa inni tokko qabeenya konkolaataati. Motummaan biyyattii waggaa 10 walitti dhaabdee biyyattiin dhibbeentaa 10 oliin guddataa turte jedhus, guddinni kuni sadarkaa biyyatti fooyyessuu hin dandeenne.
Namoonni heddu qaraxa hanga %300 kaffaluudhaaf dirqamu. Gama biraatiin, namoonni angoo, firaa fi hariiroo qabanitti dhimma bayuudhaan konkolaataa heddu qaraxa malee galchan akka jiranis yeroo addaddatti gabaafamaa tureera.
Previous articleOromoof barri 2016 kan garajabeennaa fi ukkaamsaan keessatti daangaa ce’e ta’uu isaa HRW ibse
Next articleQaaraa (Qacaa) diimaa soorachuun carraa du’uu %13 hir’isa jedhu qorattoonni